မြစ်ဆုံစီမံကိန်း အပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းရေး သမ္မတ ရှီက...
15 ม.ค. 2563 - 18:47 น.
"ငှက်ပျောစီမံကိန်းတွေ၊ အထူးသဖြင့် မြစ်ဆုံ ဆို ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေ လုံးဝမလိုလားဘူး။ ဒါကြောင့် ရပ်ဆိုင်းဖို့အလေးအနက်တောင်းဆိုတာ။ တရုတ်ရဲ့ တခြားအကြီးစားစီမံကိန်းတွေမှာလည်း နှစ်နိုင်ငံ အိမ်နီးချင်းကောင်းပီသစွာနဲ့ မူကောင်းကောင်းချမှတ်သင့်တယ်။ ဘသာဝပတ်ဝန်း ကျင် ဆိုးကျိုး၊ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်တာမျိုးကို နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းနဲ့အညီ တရုတ်ပြည်မှာ ရှိတဲ့စံချိန်စံညွှန်းနဲ့အညီ လုပ်ဆောင်ပေးပါ။ တစ်ဦးတစ်ဖက်ရဲ့အကျိုးအမြတ်ပဲတွက်ပြီး တခြားဘာဖြစ်ဖြစ် ဆိုတာမျိုးထက် နှစ်ဖက်အကျိုးရှိတဲ့အပိုင်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလုပ်ဖို့ပါ" လို့ ဦးအင်ဝပ်နော်အောင်က ပြောပါတယ်။
အဲဒီစာမှာ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင်လာရောက်တာကို ကချင်ပြည်သူတွေက ကြိုဆိုတဲ့ အကြောင်းနဲ့ ကချင်ပြည်နယ်ဟာ တရုတ်နဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေပြီး ကျောက်စိမ်းကူးသန်းရောင်းဝယ်ခြင်းကြောင့် ဟိုအရင်းတည်းက ဖော်ရွှေတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့တယ်လို့ စတင်ဖော်ပြထားပါတယ်။
อัลบั้มภาพ မြစ်ဆုံစီမံကိန်း အပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းရေး သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင်ထံ ကချင်အရပ်ဘက်အဖွဲ့တွေ တောင်းဆို